मन्दिर जाँदा किन बाहिरै जुत्ता फुकाल्न लगाइन्छ ? यस्तो छ कारण -
Home/Lifestyle/मन्दिर जाँदा किन बाहिरै जुत्ता फुकाल्न लगाइन्छ ? यस्तो छ कारण
मन्दिर जाँदा किन बाहिरै जुत्ता फुकाल्न लगाइन्छ ? यस्तो छ कारण
काठमाण्डौ । हिन्दु धर्ममा मन्दिरहरू सामूहिक आस्था प्रकट गर्ने केन्द्र हुन् । आस्था र सामाजिकताका भावहरूलाई समेट्दै सनातन धर्ममा धार्मिक प्रांगणका रूपमा मन्दिरको निर्माण गरिएको हो । सभ्य समाजको कल्पनालाई मद्देनजर गर्दै यी मन्दिरहरूमा जाने र कर्मकाण्ड गर्ने केही नियम बनाइएका छन् । यस्ता नियममा जुत्ता चप्पल बाहिरै खोल्ने नियम पनि पर्छ । किन यसो गरिन्छ त ? जुत्ता चप्पलमा राजसिक र तामसिक धातुहरूको प्रधानता हुन्छ । यो धातु पातालबाट आउने नकारात्मक ऊर्जालाई पृथ्वीको वातावरणमा मिसिनका लागि माध्यम बन्छ । मन्दिर परिसरमा चारैतर्फ ईश्वरीय प्रभावको फलस्वरूप सात्विकता र चैतन्यको वातावरण हुन्छ ।
यस्तो पवित्र वातावरणमा जुत्ता चप्पलले पातालको नकारात्मक ऊर्जा मन्दिरमा ल्याएर अपवित्र गराउँछ । अनि जुत्ता चप्पलमा धूलो र हिलो पनि टाँसिएको हुन सक्छ । यस्ता धूलोका कणहरूले मन्दिरमा नकारात्मक ऊर्जा फैलाइदिन्छन् । जुत्ता चप्पल लगाउने व्यक्तिको मानसिक स्तर पनि एक विशेष प्रकारको स्थितिमा हुन्छ । महंगो जुत्ता चप्पल लगाउने व्यक्तिमा एकखाले घमण्ड हुन्छ । हाम्रो समाजमा जुत्ताबाट धनी गरीब छुट्याउने पनि गरिएको छ । मन्दिरभित्र धनी र गरीबका बीचको फरक नछुट्टियोस् भन्नका लागि पनि जुत्ता चप्पल बाहिर खोलिएको हो । यसरी बाहिरै खोल्दा हामी आफ्नो पहिचानजन्य अहंकारलाई पनि बाहिरै उतार्छाैं र ईश्वरप्रति आफूलाई समर्पित गर्ने भाव बनाउँछौं ।
मन्दिरको वातावरण सात्विकताका कारण सधैं शीतल हुन्छ । हामीले नांगो खुट्टाका साथ मन्दिरको प्रांगणमा प्रवेश गर्दा त्यो शीतलतालाई पूरै शरीरमा महसूस गर्छौं । यसले तन र मन दुवैमा शीतलता छाउँछ । यिनै आधारहरूका कारण मन्दिरहरूमा जुत्ता चप्पल लगाएर जान वर्जित गरिएको छ । उसै पनि मन्दिरमा जुत्ता चप्पल विना नै हाम्रो मनले शान्ति र सात्विक वातावरण प्राप्त गर्छ ।एजेन्सीको सहयोगमा
Men with this zodiac sign tend to be good lovers, never cheat
Here are7things not to give asagift.
If you always want happiness and peace in your family, do this
Keep in mind these 8 things will always bring happiness and peace at home
Erick Blackshire says:
To be happy in life, never give up these4tasks incomplete